Maurizio Sarri oo magacaabay kooxaha ku guuleysan kara xili ciyaareedkan tartanka Champions League – Gool FM
Maurizio Sarri oo magacaabay kooxaha ku guuleysan kara xili ciyaareedkan tartanka Champions League
(Chelsea) 16 Okt 2018. Macalinka reer Talyaani ee kooxda Chelsea Maurizio Sarri ayaa ka warbixiyay kooxaha ku guuleysan kara xili ciyaareedkan 2018/2019 tartanka Champions League, ka hor inta uusan xaqiijin sida uu ula dhacsan yahay qorsho ciyaareedka Pep Guardiola.
Kooxda Chelsea ayaa waxay ka maqan tahay xili ciyaareedkan 2018/2019 tartanka Champions League, kadib markii ay kaga dhameysteen booska 5-aad ee dhanka kala sareynta horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay.
Maurizio Sarri oo ka hadlay kooxaha ku guuleysan kara xili ciyaareedkan tartanka Champions League ayaa wuxuu yiri:
“Juventus malahan koox kula tartanta horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga, islamarkaana si dhaqso ah ayey u socotaa, dhanka kale waxay xili ciyaareedkan ku guuleysan karaan tartanka Champions League”.
“Waxaa jira labo musharax ee ku guuleysan karta tartanka Champions League, waana kooxaha Juventus iyo Manchester City, aniga ahaan marka aad fiiriso qaab ciyaareedka kooxda Pep Guardiola waa musharaxa labaad”.
EEG SAFAFKA ay ku soo gali karaan Brazil vs Argentina kulanka Caawa
Qoyska Lionel Messi oo weerar culus ku qaaday halyayga xulka qaranka Argantina ee Diego Maradona